Igumbi likaNanny Quinn - I-Airbnb
Igumbi likaNanny Quinn
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRosemary
Umamkeli wakho wamkelekile kweli fulethi lilungiswe kakuhle nelihle. Ibekwe ngaphezulu kwendawo yokutyela kaNanny Quinn kunye nebha kwaye ikufuphi ne-Lock 18 kwiRoyal Canal Way, kwaye iphakathi kweelali zaseKinnegad naseKillucan. Kungaphantsi kweyure ukusuka eDublin kunye nemizuzu engama-20 ukusuka eMullingar.
IApartment kaNanny Quinn, Indawo yokutyela kunye neBar lishishini elijolise kusapho. Indawo yokutyela kunye nebar zingoLwesine ukuya ngeCawa kunye neeHolide zeBhanki. Sinikeza ukutya okunexabiso eliphezulu kakhulu. Jonga iphepha lethu likaFacebook.
Ukubhukisha indawo zokutyela kuyacetyiswa kwaye ngenxa ye-COVID-19. zinyanzelekile.
Isetingi ebukekayo kunye nenzolo yasemaphandleni yeNanny Quinn's yenza le ndawo ifaneleke kakhulu kwabo bafuna ukubaleka kuyo yonke. Sisisiseko esifanelekileyo sokundwendwela izinto ezininzi ezinomtsalane kubandakanya iZiko lokuDlalisa laManzi iDerrymore Springs, eKillucan. Kufuphi ungandwendwela iBelvedere House kunye neGardens Mullingar kunye noDonga lwayo oludumileyo lweJealous Wall, iZiko lobuGcisa laseMullingar, iziko leMidlands Regional Comhaltas eMullingar, iNduli yaseUisneach, ekudala ithathwa njengeziko leMythological and Sacred yaseIreland. I-Fore Abbey kunye nemimangaliso yayo esixhenxe yindlela emfutshane. Kutheni ungaqeshi isikhephe okanye uye kuloba eLilliput, eLough Ennell okanye undwendwele elinye lamachibi akufutshane- iLough Owel kunye neLough Derravaragh. I-Meander kwinqaba kunye neegadi eTullynally Castle, dlala i-pitch kunye ne-putt e-Tullaghan Pitch kunye ne-Putt yobuntshatsheli obu-18 okanye udlale igalufa e-Mullingar okanye e-Tyrrellspass.
Ngendawo yayo esembindini, uninzi lwezinto ezinomtsalane kunye nezinto ezenziwayo kwiidolophu ezikufutshane nakwiingingqi zingaphakathi kweyure yokuqhuba. Nokuba kukutya, ukukhwela ibhayisekile, ukuhambahamba, ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukuyothenga, ukukhenketha okanye ukuphumla nje, le ndawo yeyona ndawo ifanelekileyo.
Sikhuthaza iindwendwe ukuba ziqhagamshelane nathi ngokukhawuleza ukuba zinawo nawuphi na umbuzo okanye isicelo.
Indawo yethu yokutyela kunye nebhari zibekwe ngezantsi; usapho olunobuhlobo, siyabamkela abantwana kwaye sibe nemenyu evumelanayo. Indawo yebar ipholile kwaye inika ithuba lokuphumla kunye nokuncokola nabantu basekhaya kwaye ngokuqinisekileyo ukudibana nabasebenzi bethu.
Indawo yethu yokutyela kunye nebhari zibekwe ngezantsi; usapho…